प्रामाणिकता र सेवा को ग्यारेन्टी
बाटोको चरण। आत्मविश्वासका साथ किन्नुहोस्।
नि: शुल्क खरीददार संरक्षण
मनको शान्ति संग आफ्नो सपना घडी खरीद गर्नुहोस्
हामी जालसाजी र प्रतिकृतिको बिरूद्ध संरक्षण गर्दछौं।
साँचो मनको शान्ति, शुरू देखि समाप्त गर्न को लागी
किनमेल गर्न चलाख तरीका
तपाईंको टाइमपीस स्वतन्त्र प्रमाणीकरणकर्ताहरूको टोली द्वारा प्रमाणित गरिएको छ।
तपाईंको घडी हस्ताक्षर-सीधा डेलिभरीको साथ सिधा प्रमाणिकर्ताबाट पठाइन्छ।
तपाईंलाई कुनै मूल्य छैन
वाच र्यापोर्टले प्रमाणीकरण प्रक्रियाको सबै लागतहरू समेट्छ।
अब मेरो बियर ल्याउनुहोस्
अवलोकन र्यापोर्टले तपाईंको खरीदलाई धेरै गम्भीरताका साथ लिन्छ। हामी लेखा लिन्छौं, समीक्षा गर्छौं र नक्कल बिरूद्ध रक्षा गर्न प्रत्येक लिस्टि .्ग गर्छौं। हाम्रो अवलोकन निरीक्षकहरू विज्ञहरू हुन् र उनीहरूसँग १०० वर्ष भन्दा बढीको अनुभव संयुक्त छ।
वाच र्यापोर्टले प्रामाणिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्दछ यदि हामीले विक्रेताबाट प्राप्त गरेको आइटम १००% प्रामाणिक छ। यदि तपाईंलाई आफ्नो खरीदको बारे कुनै शंका छ भने, यसलाई फिर्ता पठाउनुहोस् हाम्रो "परेशानी निःशुल्क" रिटर्न प्रक्रिया प्रयोग गरेर र पूर्ण फिर्ती फिर्ता लिनुहोस्। हाम्रो फिर्ती नीतिको बारेमा थप जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
वाच र्यापोर्टले सेवा उत्कृष्टतामा विश्वास गर्दछ। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई विश्व-स्तरीय समर्थन मार्गको हरेक चरणहरू प्रदान गर्न प्रयास गर्दछौं। हामी सहज र सफल शपिंग अनुभवको लागि लक्ष्य राख्छौं।
घडीहरूको लागि प्रामाणिकता ग्यारेन्टी के हो?
वाच र्यापोर्टको प्रामाणिकता ग्यारेन्टी भनेको एक सेवा हो जसले खरिददारहरूलाई विश्वासको साथ शपिंग गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। हाम्रो तेस्रो-पार्टी प्रमाणिककर्ताहरूले सबै वस्तुहरू खरिदकर्तालाई पठाइनु अघि उनीहरूको शारीरिक निरीक्षण गर्दछन्।
कसरी प्रामाणिकता ग्यारेन्टी काम गर्दछ?
सजिलो छ! ब्राउज र शप गर्नुहोस् र्यापोर्टको सूचीहरू "प्रामाणिकता ग्यारेन्टी" ब्याजको साथ हेर्नुहोस्। जब तपाईं आइटम खरीद गर्नुहुन्छ, विक्रेताले आईटम सिधा तेस्रो-पार्टी प्रमाणिकर्तालाई पठाउँदछ। प्रामाणिककर्ता राम्रोसँग निरीक्षण गर्नेछ र तपाईंको वस्तुको प्रामाणिकता प्रमाणित गर्दछ यो तपाईंलाई सुरक्षित रूपमा ढुवानी गर्नु अघि।
के म प्रामाणिकता ग्यारेन्टीको लागि शुल्क लिने छु?
होइन। प्रमाणिकरण ग्यारेन्टी सेवामार्फत वाच वाचले प्रमाणीकरणको लागत, साथै दुई-दिन सुरक्षित तेर्सो-पार्टी प्रमाणिकर्ता सुविधाबाट खरीददारलाई कभर गर्दछ।
के पुरानो घडीहरू प्रामाणिकता ग्यारेन्टीको लागि योग्य छन्?
भिन्टेज वाचहरू प्रामाणिकता ग्यारेन्टी सेवाको लागि योग्य छन्। भिन्टेज वाचहरू जुन तेस्रो-पार्टी प्रमाणीकरण पार्टनर द्वारा प्रमाणिक रूपमा प्रमाणीकरण गरिएको हो प्रतिस्थापन भागहरू हुन सक्दछ जुन मौलिक निर्माताबाट होईन यदि मूल उत्पादकले अब त्यस भागलाई गर्दैन भने। पुरानो टाइमपीसहरू र धेरै प्रयोग गरिएको घडीहरू पानीलाई उनीहरूको मूल मूल्या rating्कन प्रतिरोधात्मक नहुन सक्छ। कृपया तपाईंको वाचलाई पानीमा प्रदर्शन गर्नु अघि वाचकसँग परामर्श गर्नुहोस्। मेकानिकल वाचहरू अन्य प्रकारका वाचहरू भन्दा बढी नाजुक हुन्छन्। कुनै गतिविधि गर्नुभन्दा पहिले सावधान रहनुहोस् जसले घडीमा झटका राख्न सक्दछ।
प्रमाणीकरणकर्तामा के हुन्छ?
वाच र्यापोर्ट प्रमाणीकरण पार्टनरले वाच प्राप्त गरेपछि, प्रमाणीकरण पार्टनरले सर्वप्रथम वस्तुको पुष्टि गर्दछ र संपार्श्विक सामग्री सूचीबद्ध शीर्षक, वर्णन, र छविहरूसँग उपयुक्त छ। त्यसो भए तिनीहरूले बहु-पोइन्ट भौतिक प्रमाणीकरण निरीक्षण गर्ने छन्। अन्तमा, सुरक्षा ट्याग यस घडीमा संलग्न हुनेछ। भिन्टेज र धेरै प्रयोग गरिएको घडीहरूलाई अनुभवी वाचमेकरले सटीक समयकीपुन पुनःस्थापना गर्न सर्विसिंग आवश्यक हुन सक्दछ। प्रामाणिकता ग्यारेन्टीले वारेन्टी प्रदान गर्दैन।
कसले प्रमाणीकरण सेवाहरू प्रदान गर्दै छ?
वाच र्यापोर्टले अग्रणी उद्योग विज्ञहरूसँग साझेदारी गरेका छन जसको सेवाहरू र क्षमताहरू राम्ररी हेराई गरिएको छ। प्रमाणीकरण पार्टनरहरू उनीहरूको उद्योगमा नेताहरू हुन्, बर्षको अनुभवको साथ, ब्रान्ड सर्टिफाइड वाचमेकरहरू र टेक्नीशियनहरू, अत्याधुनिक सुविधाहरूको राज्यको अत्याधुनिक सुविधाको प्रयोग गरेर।
प्रमाणीकरण प्रक्रिया कहिले लिने छ? कहिले सम्म म मेरो वस्तु प्राप्त गर्न?
तपाईंले आफ्नो वस्तु खरीद गरेपछि, विक्रेतालाई र्यापोर्टको तेस्रो-पार्टी प्रमाणीकरण पार्टनरलाई आईटम पठाउन आवश्यक पर्दछ, जसले तपाईंको वस्तुलाई रसिदको दुई व्यापार दिन भित्रमा प्रक्रिया गर्दछ। प्रामाणिकता प्रमाणिकरण प्रक्रिया र समय फ्रेम वस्तु र जटिलताको आधारमा फरक हुन सक्छ। एक पटक आईटम सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण भयो, आइटम हस्ताक्षर पुष्टि सहित सुरक्षित डेलिभरी संग सित्तैमा तपाईंलाई पठाइन्छ।
के म मेरो खरीदको साथ मूल प्याकेजि receive प्राप्त गर्नेछु?
हो, यदि विक्रेताले लिस्टिंगमा वर्णन गरिए अनुसार मूल प्याकेजि included समावेश गरेको छ भने, सबै घटक तपाईंलाई पठाइनेछ।
घडीहरूको लागि प्रामाणिकता ग्यारेन्टी सेवा ("प्रामाणिकता ग्यारेन्टी" वा "घडीहरूको लागि प्रामाणिकता ग्यारेन्टी") तेस्रो-पार्टी निरीक्षण र प्रमाणीकरण सेवाहरू ("सेवाहरू") वाचरापोर्ट डॉट कॉममा बेचिएका आइटमहरूको लागि अनिवार्य गर्दछ। यी प्रामाणिकता ग्यारेन्टी सर्तहरू र सर्तहरू ("सर्तहरू") हेर्ने र सत्यता ग्यारेन्टी योग्य वस्तुहरूका लागि प्रामाणिकता ग्यारेन्टी सेवामा लागू हुन्छ वाचरापोर्ट.कटमा बेचे र खरिद गरियो र सर्तहरू सेट गर्दछ जसमा वाच रेपोर्टले तपाईंलाई पहुँच र उपयोगको प्रस्ताव गर्दछ। घडीहरूका लागि प्रामाणिकता ग्यारेन्टी सेवा।
वाच र्यापोर्टको उपयोगिताका सर्तहरू।
वाचराप्पोर्ट.क. का प्रयोगका सर्तहरू, वाच र्यापोर्टको गोपनीयता नीति र हाम्रो साइटहरूमा पोष्ट गरिएका सबै नीतिहरू (सामूहिक रूपमा, र उही रूपमा समय-समयमा संशोधन हुन सक्छ, "र्यापोर्टका नीतिहरू") यी सर्तहरू बाहेक लागू हुन्छ। यी सर्तहरू र वाच रेपोर्ट नीतिहरू बीच द्वन्द्व वा विसंगति भएमा यी सर्तहरूले ती सबै कुराको नियन्त्रण गर्न को लागी स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरे। यी मामिलाहरूमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएका सबै मामिलाहरूको लागि, हेर्नुहोस् र्यापोर्टको नीतिहरू नियन्त्रण हुनेछ।
वाच र्यापोर्टको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीको लागी लागू
प्रमाणित वस्तुहरूका लागि हेर्नुहोस् र्यापोर्ट मनी फिर्ता ग्यारेन्टीले सबै आइटमहरू समावेश गर्दछ जुन योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ र प्राप्त नभएको वा क्षतिग्रस्त भएको आउँदछ। हेर्नुहोस् र्यापोर्ट पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीको बारेमा थप जान्नुहोस् यहाँ.
प्रामाणिकता ग्यारेन्टी सेवाको विवरण।
वाचरापोर्ट डॉट कॉममा एक प्रामाणिकता ग्यारेन्टी आईटमको खरीद पछि, वस्तुको लिस्टिंग विवरणहरूमा वस्तुको प्रामाणिकता र अनुरूपताको सावधानीपूर्वक निरीक्षण गर्न वस्तु जाँच गरिएको तेस्रो-पार्टी प्रमाणीकरण पार्टनरमा पठाइन्छ। तेस्रो-पार्टी प्रमाणीकरण पार्टनर द्वारा वस्तुको पुष्टिकरणमा, यो राम्रोसँग प्याकेज गरिएको छ र सुरक्षित रूपमा खरिदकर्तालाई पठाइएको छ। यदि वस्तुको प्रामाणिकता प्रमाणित गर्न सकिएन वा वस्तु वर्णन गरिएको रूपमा उल्लेखित छैन भने, यो वस्तु विक्रेतालाई फिर्ता गरिन्छ र फिर्ती जारी गरिन्छ।
सेवाहरू खरिद र वितरित प्रामाणिकता ग्यारेन्टी आईटमहरूको लागि तेस्रो-पार्टी प्रमाणीकरण पार्टनर द्वारा प्रदान गरिन्छ। ("प्रमाणीकरण पार्टनर")। प्रमाणीकरण पार्टनरले लोगो, ट्याग, सामग्री, हार्डवेयर, गुणस्तर, र अधिक लागूको रूपमा जाँच गरेर र वस्तु सूचीबद्धको बिरूद्ध शुद्धताको लागि वस्तुको निरीक्षण गर्दछ; यद्यपि प्रमाणीकरण पार्टनरले वाच वाचप्रूफिंग वा टाइमकीपिंगको शुद्धताको लागि घडी निरीक्षण गर्दैन। आईटमहरू वाच र्यापोर्ट वा यसको लाइसेन्सदाताहरू वाच र्यापोर्टको छवि क्याटलगको अंशको रूपमा वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि वाच र्यापोर्टको विशेष विवेकमा फोटोग्राफ गर्न सकिन्छ। बिक्रीको लागि सूचीबद्ध वा प्रामाणिकता ग्यारेन्टी आईटम खरीद गरेर, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ र सहमत गर्नुहुन्छ कि वस्तुहरू प्रमाणीकरण पार्टनरलाई सेवाहरू प्रदर्शन गर्नको लागि पठाइएको हो।
प्रामाणिकता ग्यारेन्टी प्रोग्राम शुल्कहरू।
सेवाहरू विक्रेताहरू र प्रामाणिकता ग्यारेन्टी आईटमहरूको लागि कुनै मूल्यमा प्रदान गरिएको छैन जुन वाचरापोर्ट डॉट कॉममा खरीद गरिएको छ वा बेचिन्छ; यद्यपि वाच र्यापोर्टले सेवासँग सम्बन्धित शुल्क वा लागतहरू संस्थागत गर्न, परिवर्तन गर्न वा संशोधन गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राख्दछ, कुनै पनि समयमा वाच र्यापोर्टको पूर्ण विवेकमा।
खरीददारहरू र विक्रेताहरूमा धोखाधडी पत्ता लगाउने प्रभाव।
तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ र सहमत हुनुहुन्छ कि यदि तेस्रो-पार्टी प्रमाणिकर्ताले धोखाधडी पत्ता लगायो वा कुनै वस्तु जाली हो भनेर शंका गर्‍यो भने, त्यो वस्तु बजार स्थानको सर्कुलेशनबाट हटाइनेछ- न कि खरीदकर्ता वा विक्रेताले यस वस्तुलाई प्राप्त गर्नेछ; थप रूपमा, वाच र्यापोर्ट उचित अधिकारकर्ताहरूसँग कामको रूपमा काम गर्दछ।
प्रामाणिकता ग्यारेन्टी प्रोग्रामको सम्बन्धमा र्यापोर्टको व्यक्तिगत जानकारीको संग्रह गोपनीयता नीति द्वारा शासित हुन्छ जुन तपाईंको वाचरापोर्ट डॉट वेबसाइटको प्रयोगमा लागू हुन्छ। कार्यक्रम अन्तर्गत प्रमाणीकरण पार्टनर को सेवाहरु प्रदान गर्न को लागी, अर्डर जानकारी, तपाइँको नाम, ठेगाना, ईमेल ठेगाना, टेलिफोन नम्बर सहित, तर सीमित छैन, प्रमाणीकरण पार्टनरलाई प्रदान गरीन्छ। कुनै वस्तु बेच्न वा खरीद गरेर, तपाईं वाच रेपोर्टलाई प्रमाणीकरण पार्टनरलाई यस अर्डर जानकारी प्रदान गर्न निर्देशन दिनुहुन्छ, जसले यस जानकारी यस संस्थासँग सम्बन्धित, सेवा प्रदायकहरू, र अन्य तेस्रो पक्षहरू (जस्तै शिपिंग क्यारियरहरू र राजस्व अधिकारीहरू) लाई संकलन गर्न सक्दछ। जस्तै सेवाहरू प्रदर्शन गर्न।
हराएको, बिग्रिएको वा आइटम वितरित छैन।
प्रामाणिकता ग्यारेन्टी प्रक्रियाको क्रममा हराएको वा बिग्रिएको चीजहरू वाच र्यापोर्टको मनी फिर्ता ग्यारेन्टीले सुरक्षित गर्दछ।
कार्यक्रम अपडेट र विच्छेदन।
वाच रैपोर्टसँग अधिकार छ, तर दायित्व छैन, परिवर्तन गर्न, संशोधन गर्न, बदल्न, अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न, र / वा स्थायी रूपमा प्रामाणिकता ग्यारेन्टी प्रोग्राम, प्रामाणिकता ग्यारेन्टीको नाम, कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान गरिएका कुनै पनि सेवाहरू, र / वा कार्यक्षमता प्रामाणिकता ग्यारेन्टी अन्तर्गत, र / वा सेवा प्रदायकहरू प्रामाणिकता ग्यारेन्टी अन्तर्गत कुनै पनि वा सबै सेवाहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्‍यो, कुनै पनि समय, यसको विवेकमा, तपाईंलाई वा सूचना बिना।
वाच र्यापोर्टले यी शर्तहरू परिमार्जन गर्न सक्दछ, लागू शुल्क सहित, कुनै पनि समयमा वाच रेपोर्ट साइटमा परिमार्जित सर्तहरू पोस्ट गरेर। अन्य ठाउँमा भने जस्तो बाहेक, सबै परिमार्जित सर्तहरू तुरून्त र स्वचालित तवरले प्रभाव देखा पर्नेछ जब वाच र्यापोर्ट साइटमा पोस्ट गरिन्छ।